1Xbet yokungena kwikhabhathi yomntu, Ngena nge-app yeselula 1xbet
Ngena kwiKhabhinethi 1xbet zobuqu
Ihlabathi lokubheja lahlukile kwaye inani leenkampani zokubheja likhula minyaka le, kodwa akukho mdlali owayengazi 1xbet ofisi. Le nkampani izibhengeze njengeyona ininzi:
Inokuthenjwa – inkampani inyanzelekile ukuba ihlawule iimali zokuwina kubadlali ukuya kuthi ga kwimali ebekwe yinkampani engaphezulu 1 engange ezizigidi
Uzinzile – apha abadlali baya kusoloko ukufumana ukubheja uthandwa kakhulu
Ezahlukeneyo – inkampani inika ukubheja kuphela kwezemidlalo, kodwa nokubheja kwi-sweepstakes, ukubheja kwimiboniso yeentetho, yaku online kunye nokunye okuninzi.
Ukuze abadlali baqale ukubheja, Kuya kufuneka wenze iakhawunti yakho, ukwenza oku, Kuya kufuneka uqale ngenkqubo yobhaliso ngenye yeendlela ezicetywayo:
Ngokusebenzisa inombolo yefowuni ephathekayo
Ngonxibelelwano lwasentlalweni (Vkontakte, Imeyile kaGoogle, Odnoklassniki)
Eyona misebenzi iphambili yekhabhinethi yobuqu
Ikhabhinethi yobuqu eofisini yenziwe lula kangangoko, ibonisa la macandelo alandelayo:
Idatha yakho – Nalu lonke ulwazi malunga neakhawunti yomdlali, Iinkcukacha zakhe kunye nedilesi ye-imeyile ebhaliswe kuyo iakhawunti. Kwakhona, kweli candelo umdlali angalutshintsha ulwazi malunga naye, useto olusisiseko kunye negama eligqithisiweyo.
STEAM – Kweli candelo, abadlali banikwa ithuba lokutshintshiselana ngamanqaku aqokelelweyo ngamabhaso axabisekileyo avela kwinkampani yeebhuki. Sebenzisa eli nqaku, kufuneka ugcwalise ifom kwaye uqhagamshele imali yeMali yeMali.
Inkqubo yamaqabane – Kweli candelo ungagqiba isivumelwano sentsebenziswano nenkampani. Ukwenza oku, kufuneka ube newebhusayithi okanye iphepha kwinethiwekhi yoluntu enxulumene nemidlalo.
Impumelelo yakho – Apha ungabona manani ekubheja okuphumeleleyo kunye nayo yonke imidlalo kunye nokubheja apho umdlali athe wathatha inxaxheba khona.
Gcwalisa iakhawunti yakho – Ukuba ucofa kweli qhosha, imenyu iya kuvula apho ungakhetha khona ukuba ungayibeka njani, kukho ezi ndlela zilandelayo: amakhadi ebhanki, Imali yeYandex, WebMoney, abaqhubi beselfowuni, Imali engezantsi yedijithali.
Rhoxisa imali – nantsi yonke into icacile, ngoncedo lweli candelo, Abadlali banokurhoxisa imali abayiphumeleleyo.
Nge-akhawunti yobuqu kunokwenzeka ukuba uthumele imali kumhlobo, ukusebenzisa lo msebenzi kuyimfuneko ukugunyazisa inombolo yakho yeselfowuni kwisiza. Oku kuyimfuneko kuba ugqithiselo luqinisekiswa ngekhowudi ye-sms. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ayingabo bonke ababhuki abanalo msebenzi.
Ukwengeza, kwikhabhinethi yobuqu uya kufumana icandelo elinje “Useto” kuyo ungenza imisebenzi esemgangathweni eya kwenza lula ukubheja, Abadlali banokubhalisela iincwadana zeendaba kunye nokwenyusa.
Le peculiarity inkampani ukubheja 1xbet kukuba ukongeza kwimisebenzi yesiqhelo, abadlali banokufikelela kwimisebenzi “Umgca” kwaye “Phila”, Oko kuthetha ukuba umsebenzisi angongeza imidlalo ayithandayo kwiiFavorites ukuhlala enazo kuzo.
Indlela ungene kwi 1xbet ngokusebenzisa indawo esemthethweni
Kubasebenzisi abaninzi, ukudlala indawo esemthethweni kuphela kwendlela yokuphuma, kuba ukukhuphela kunye nokufaka usetyenziso kunye neenkqubo ezongezelelweyo zabadlali ziyingxaki. Ke ngoko, ukuya kwiakhawunti yobuqu ngokusebenzisa indawo esemthethweni, Kufuneka ungene kwaye ubhalise, enye yezi ndlela:
Ngokucofa kanye – ngokubhalisa ngale ndlela ungangena kwikhabhinethi yakho, kodwa awukwazi ukugembula kwaye udlale yekhasino online, kunye nokubheja kwii-sweepstakes, nanjengoko le ingeyiyo indlela yokubhalisa engaphelelanga.
Ngenombolo yefowuni ephathekayo – Apha kuya kufuneka unxibelelanise inombolo yakho yefowuni kwaye uqinisekise ubhaliso ngomyalezo weSMS oza kuthi ufike kwinombolo echaziweyo.
Iinethiwekhi zentlalo – Kuya kufuneka ukhethe iqonga: VKontakte, I-Odnoklassniki kunye neGoogle Mail kunye nekhonkco akhawunti ngokufaka iphasiwedi kunye nokungena kwi-intanethi. Uncedo lwale ndlela kukuba awuzukufuna ukufaka idatha ukuze ungene, Kuya kufuneka ucofe i icon yenethiwekhi obhalise ngayo.
Ngedilesi ye-imeyile – ngenisa nje @mail kwaye uqinisekise ubhaliso ngokunqakraza kwikhonkco eliza kuza nonobumba.
Sayina ungene kwiikhabinethi yakho yobuqu ye-1xbet ngokusebenzisa iapp
Isicelo sisidibanisi esikhulu kakhulu kubadlali, iqulethe onke amacandelo afanayo nendawo esemthethweni, Isicelo kuphela iphepha elilunge ngakumbi kwi-Intanethi. Isicelo sinezibonelelo zilandelayo:
Abadlali baya kuba nokufikelela kwi-app naphi na emhlabeni apho kukho i-intanethi
Ukubhaliswa ngokukhawuleza, nayo enokwenziwa kwi-app
Ukukwazi ukufaka kunye nokukhupha imali kwiakhawunti yokudlala
Insiza isebenza ngokukhawuleza kunephepha lewebhu elisemthethweni
Ulawulo olupheleleyo lweakhawunti
Inkqubo yokubheja ekhululekile kakhulu
Ukugcina imbali yokubheja
Inguqulelo yeapps iyafumaneka kuzo zombini iifowuni kunye neetafile
Ukongeza ukubheja kwezemidlalo njengesiqhelo, Abadlali banokufumana ezinye iithebhu kwisicelo, oko kukuthi:
Izinto eziluncedo Ukungancedi
Iindlela ezahlukeneyo zokugunyazisa Icandelo leenkcukacha-manani aligqitywanga
Ukubheja kwizibalo Usasazo oluninzi kwi-Intanethi lunokuvulwa ngaxeshanye
Ingxoxo ebukhoma nomphathi wenkxaso yezobuchwephesha
Amandla okuthatha inxaxheba ngesicelo kwiibhonasi kunye nokunyusa
Inkqubo inokusetyenziswa nakwesiphi na isixhobo, Zombini zine-android kunye nee-iphones, isicelo asifuni uhlaziyo lwesoftware yamva nje, indawo eyoneleyo yasimahla kwisixhobo sakho.
Ukwenza iakhawunti yobuqu kwifowuni ephathekayo kuya kuwenza lula umsebenzi, kuba apha yonke into ilula kakhulu, ukusuka kubeko lweethebhu ukubheja.
Ilungelo lokushicilela © 2022